Etazonia: Mitombo ny Tahan’ny Fahantran’ny Hispanika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Oktobra 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, বাংলা, 日本語, Italiano, русский, srpski, Español
Miharatsy hatrany ny toe-karena Amerikana. Manampy ny tahan'ny tsy fisian'asa efa tsy mety miala ihany koa ny tahan'ny fahantrana izay mahakasika vahoaka maherin'ny 46 tapitrisa, 15,1 isan-jaton'ny vahoaka, araka ny hita tamin'ny fanisam-bahoaka farany. Nanamafy ny manam-pahaizana fa ity no taha ambony indrindra hatramin'ny taona 1993.
USA español, bilaogin'i Cristina F. Pereda, nanome antontan'isa mahasanganehana izay mampikatso tanteraka ny fandrosoan'ny hispanika:
Ahitana horonantsary fanadihadiana ny bilaogy GB Latino TV ana mpanao gazety arzantina iray, talanjona tanteraka tamin'ny fahitany ny tahan'ny fahantrana ao Etazonia. Nasiany fehinteny fohy miaraka aminy:
InmigranteTV, etsy ankilany nahita tarehimarika mitovy tamin'ilay antontan'isan'ny ankohonana Hispanika ihany koa, navoitrany fa manamaloka ny fitondran'i Obama izany toe-draharaha ara-toe-karena misy ankehitriny izany:
Tsy niandry ela ny fihetseham-po tao amin'ny Twitter. PV Marketing (@pvmkt) [es] nizara horonantsary:
Lahatsary milaza fa Hispanika iray amin'ireo efatra (#hispanos) ao
Meredith Dodson (@dodsonadvocate) [es] tsy taitra amin'izany tarehimarika mahakivy izany:
Manaitra, tsy izany mihitsy 🙁 RT @alexcawthornedc: tahan'ny fahantrana ho an'ny mainty hoditra sy ny Hispanika (>27%) avo roa heny noho ny an'ny fotsy hoditra #povertydata #Census
Carmen Ortiz-McGhee (@ortizmcghee) [es] kosa talanjona mahita ny fahantran'ireo ankizy Hispanika:
Alex Guerrero (@Vzla22 ) [es] namerina izany indray tao amin'ny tweet-ny:
Tsy rariny: 15%n’ ny Amerikana no miaina anaty fahantrana. Amin'ireo Latino, 26.1% ny taha= 1 ao anatin'ny 4 >> http://1.usa.gov/pCOqCe #latism
Farany, araka ny hevitr'i Eileen C. Rivera (@eileencrivera) fambara ratsy hafa ho an'ny minorite roa tonta ao amin'ny firenena ny tarehimarika navoakan'ny fanisam-bahoaka: